खोटाङमा कुकुरको टोकाईबाट १५ जना घाइते - sailungonline
६ कार्तिक २०७८, शनिबार २१:५१ । खोटाङ
खोटाङमा एकै दिन १५ जनालाई बेवारिसे कुकुरले टोकेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१ दिक्तेलबजारमा शनिबार १५ जनालाई बेवारिसे कुकुरले टोकेको हो ।
कुकुरको टोकाईबाट घाइते भएकामध्ये दुई जनालाई शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल टेकु रेफर गरिएको जिल्ला अस्पताल खोटाङका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. बैभव मल्लिकले बताए । अन्य १३ जना भने हप्ता दिनभित्र तीन डोजको एन्टीरेविज खोप लगाउनेगरी पहिलो खोप लगाएर फर्किएका छन् ।
‘ग्रेड थ्री’ अर्थात कुकुरको टोकाईबाट गहिरो घाउ लागेका कारण दुई जनालाई भ्याक्सिन दिएर अन्यत्र रेफर गरिएको हो । एकै दिन १५ जनालाई कुकुरले टोकेपछि साविकको सदरमुकाम दिक्तेलबजारमा कुकुर आतंक फैलिएको छ । कुकुरले दिक्तेलको रत्नपार्कबाट हाटडाँडासम्म कुददै टोक्दै गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
रत्नपार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कुकुरले टोकेको छ । कुकुरले अस्पताल चोकमासमेत एक जनालाई टोकेको छ । ‘ग्रेड टु’ अर्थात कुकुरकोटोकाईबाट छालामा चोट लागेका घाइतेलाई खोप हप्ता दिनभित्र तीन डोज खोप दिनुपर्ने हुन्छ । तर ‘ग्रेड वन’ अर्थात कुकुरको टोकाईबाट छालामा चोट नलागेका घाइतेलाई भने सामान्य सरसफाई गरे पुग्ने डा. मल्लिकले बताए ।
डाक्टरकाअनुसार ‘ग्रेड थ्री’मा पर्ने घाइतेको घाउ वरपरको भाइरस नष्ट गर्नका लागि अर्को थरीको भ्याक्सिन हाल्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि धरान वा काठमाडौं पुग्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका लागि रेविजविरुद्धको मासिक दुई सय भाइल खोप आउने गरेको छ । पछिल्लो समय दैनिक दुई/तीन जना कुकुरले टोकेका घाइते उपचारमा आउने गरेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।